" ချစ်သူသက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်မှာ ပိုက်ဆံပန်းစည်းအကြီးကြီးကိုSurpriseလက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိခဲ့တဲ့ ချိုမာ'' - Cele Gabar
” ချစ်သူသက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်မှာ ပိုက်ဆံပန်းစည်းအကြီးကြီးကိုSurpriseလက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိခဲ့တဲ့ ချိုမာ”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေအ​ေနာကတော့ သူမရဲ့ထူးထူးခြားခြားLive saleလွှင့်ကာ ရောင်းချခဲ့မှုကြောင့် Live saleလောကမှာ ဦးစွာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆယ်လီတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ အမျိုးသားပရိသတ်တွေအားပေးဝန်းရံခံရသူဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးချင်းတောင်ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့အချစ်ရေးကိုလည်း ပွင့်လင်းစွာချပြထားသူဖြစ်ပြီး သူမအနေနဲ့ မထင်မှတ်ရလောက်အောင်ခိစ်သူက Anniversary နေ့မှာ Surprise လက်ဆောင်လေးပေးခဲ့ကြောင်းကို”365 (anniversary) 💋Anniversary လေး လုပ်ပေးထားတာကို ဒီက မသိဘူးရယ်…နောတို့ နှစ်ယောက် Anniversary Date ဆိုဒါရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး.. စိတ်ထဲ ထည့်ထားပီးနေလာခဲ့တာ.. ကျမ က သူ့ကို ခဏ ခဏ ကွိုင်ရှာတတ်လို့လေ…၆ လ ၇လ ပြည့်သွားလဲ …ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်နလ ပြည့်သွားပီနော် ဘာညာ လုံးဝမပြောခဲ့သူလေ..
အဲ့တော့ … ကျမလဲ… မပြောလဲနေပါပစေတော့ Anniversary Dateဆိုဒါလဲ မရှိဘူး.. ဆိုပီး ဘယ်နလပြည့်လဲမသိတစ်နှစ်ပြည့်လဲ မသိတော့တဲ့ကျမပါ😆😆😆အဆိုးဆုံး ကတော့😆😆 ဒီပန်းစီး သူဝယ်ပေးဖို့ လုပ်တုန်းသူ့ဖုန်းထဲက ပန်းပုံတွေ တွေ့ပီးနင်ဘယ်သူ့ကိုဝယ်ပေးနေတာလဲ ပန်းစီးရောငွေအရေတွက်ရောဆိုတော့နောက် မိန်းကလေး အတွက်လားနောက်မိန်းကလေးနဲ့က ၃၅ရက်တောင်ရှိနေပီလား ဆိုပြီးရန်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်…သူက ဘာမှ မဟုတ်ဘူး. ပြောလဲကျမက ပိတ်တောင်ရိုက်လိုက်ပါသေးတယ်စိတ်တိုလို့လေ……..😑😑😑😑နောက်ဆုံး ပန်းစီးက ကျမ အတွက်ပါ…ဟိဟိ Sorry ချစ်သူ😁😁”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါCeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ။
Source -Naw ChoMar
” ခ်စ္သူသက္တမ္း(၁)ႏွစ္ျပည့္မွာ ပိုက္ဆံပန္းစည္းအႀကီးႀကီးကိုSurpriseလက္ေဆာင္အျဖစ္ရရွိခဲ့တဲ့ ခ်ိဳမာ”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရအ​ေနာကေတာ့ သူမရဲ႕ထူးထူးျခားျခားLive saleလႊင့္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ Live saleေလာကမွာ ဦးစြာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ဆယ္လီေတြထဲကတစ္ေယာက္ပါ။ အမ်ိဳးသားပရိသတ္ေတြအားေပးဝန္းရံခံရသူျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးခ်င္းေတာင္ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့အလွကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ကရင္တိုင္းရင္းသူေလးျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕အခ်စ္ေရးကိုလည္း ပြင့္လင္းစြာခ်ျပထားသူျဖစ္ၿပီး သူမအေနနဲ႔ မထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ခိစ္သူက Anniversary ေန႔မွာ Surprise လက္ေဆာင္ေလးေပးခဲ့ေၾကာင္းကို”365 (anniversary) 💋Anniversary ေလး လုပ္ေပးထားတာကို ဒီက မသိဘူးရယ္…ေနာတို႔ ႏွစ္ေယာက္ Anniversary Date ဆိုဒါရွိမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး.. စိတ္ထဲ ထည့္ထားပီးေနလာခဲ့တာ.. က်မ က သူ႔ကို ခဏ ခဏ ကြိဳင္ရွာတတ္လို႔ေလ…၆ လ ၇လ ျပည့္သြားလဲ …ကိုယ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဘယ္နလ ျပည့္သြားပီေနာ္ ဘာညာ လုံးဝမေျပာခဲ့သူေလ..
အဲ့ေတာ့ … က်မလဲ… မေျပာလဲေနပါပေစေတာ့ Anniversary Dateဆိုဒါလဲ မရွိဘူး.. ဆိုပီး ဘယ္နလျပည့္လဲမသိတစ္ႏွစ္ျပည့္လဲ မသိေတာ့တဲ့က်မပါ😆😆😆အဆိုးဆုံး ကေတာ့😆😆 ဒီပန္းစီး သူဝယ္ေပးဖို႔ လုပ္တုန္းသူ႔ဖုန္းထဲက ပန္းပုံေတြ ေတြ႕ပီး
နင္ ဘယ္သူ႔ကိုဝယ္ေပးေနတာလဲ ပန္းစီးေရာေငြအေရတြက္ေရာဆိုေတာ့ေနာက္ မိန္းကေလး အတြက္လားေနာက္မိန္းကေလးနဲ႔က ၃၅ရက္ေတာင္ရွိေနပီလား ဆိုၿပီးရန္ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္…သူက ဘာမွ မဟုတ္ဘူး. ေျပာလဲက်မက ပိတ္ေတာင္႐ိုက္လိုက္ပါေသးတယ္စိတ္တိုလို႔ေလ……..😑😑😑😑ေနာက္ဆုံး ပန္းစီးက က်မ အတြက္ပါ…ဟိဟိ Sorry ခ်စ္သူ😁😁”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ၾကည္ႏူးစရာပုံရိပ္ေလးေတြကိုတင္လာခဲ့တာပါCeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ။
Previous post မြေးလေးကို ရှင်ပြုပေးချင်တဲ့ အဖိုးတို့ စုံတွဲလေးရဲ့ ဆန္ဒလေးပြည့်မြောက်အောင် ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက်ရဲ့ ပီတိဖြစ်ဖွယ်ဗီဒီယိုလေး
Next post မိခင်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မိခင်ကြီးလိုအပ်နေတာလေးမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အေးချမ်းမိုး